Susa induna emuva emadodeni | Amadoda aSitayela
Amathiphu okususa izinduna emuva
Noma i-acne Kuyinkinga eyenzeka ikakhulu ebusweni, endabeni yamadoda kuyinsakavukela kakhulu ukuvela ngemuva, ngoba le ndawo inezindlala eziningi ezibumbene, futhi ithambekele kakhulu ekuqongeleleni amangqamuzana afile futhi ivaleke izimbotshana.
Kepha uma ubheka ukuthi ihlobo selisondele, futhi nesikhathi lapho sivamise ukukhombisa umzimba wethu, ukuze ukwazi nokubonisa umqolo ophelele ngaphandle kwezinduna, nazi izeluleko zokukusiza khipha izinduna emuva.
Ukuze wenze lokhu, into yokuqala okufanele uyigweme ukuthinta izinduna, ukuze ungakhuthazi ukwanda kwazo noma ukutheleleka.
Ngenkathi ye- welapha induna ngokwemvelo, uju yikhambi elihle kakhulu. Kumele ufake uju oluncane endaweni ezolashwa, ngenkathi imanzi, bese uyivumela isebenze cishe imizuzu eyi-10.
Enye indlela engokwemvelo ukulungisa inhlanganisela yesanqante, ikhukhamba kanye ne-alfalfa ku-blender, bese ufaka lo khilimu ekuphumeni kwezinduna.
Ngokunjalo, uma ukhetha izimonyo, khetha leyo mikhiqizo ngokususelwa esihlahleni setiye, ngoba izingxenye ezisebenzayo zalesi sithako zithanda ukuqeda induna futhi zinciphise ukukhiqizwa kwesikhumba okunezimboni.
Ekugcineni, ukukhuthaza isimo esihle jikelele sesikhumba sakho, kulula ukuthi ungeze izithelo nemifino eminingi ekudleni kwakho, futhi wehlise ukusetshenziswa kwama-carbohydrate, ushukela namafutha.
Imininingwane engaphezulu - Azisekho izinduna!
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Amathiphu okususa izinduna emuva
Le ntwasahlobo-ehlobo 2013, bhalisela ihembe eliphrintiwe
Ukuphinda uthole isicathulo se-nautical